भारतविरुद्ध ख्वाजाको अर्को शानदार अर्धशतक - Everest Dainik - News from Nepal
भारतविरुद्ध ख्वाजाको अर्को शानदार अर्धशतक
काठमाडौं, फागुन २९ । भारतविरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा पनि अष्ट्रेलियाका ओपनर उश्मान ख्वाजाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । उनले यो खेलमा पनि अर्धतशक प्रहार गर्न सफल भएका छन् ।
ख्वाजाले ४८ बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरे । उनले यसअघिका ४ खेलमा क्रमशः ५०, ३७, १०४ र ९१ रन प्रहार गरे । सिरिजमा ख्वाजा विराट कोहलीलाई पछि पार्दै सर्बाधिक रन बनाउने सूचीको पहिलो स्थानमा छन् । विराट दोस्रो नम्बरमा छन् ।
याे पनि पढ्नुस वान डे सिरिजः शिखरको शानदार शतक, रोहित ५ रनले चुके !
टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निधो गरेको अष्ट्रेलियाले निर्णायक खेलमा पहिलो विकेट १४.३ ओभरमा कप्तान आरोन फिंचलाई गुमाएको छ । उनलाई रविन्द्र जडेजाले २७ रनमा मैदान पभियलनको बाटो देखाए । यो समाचार तयार पार्दासमम अष्ट्रेलियाले एक विकेट गुमाउँदै १७ ओभरमा ९१ रन बनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस वान डे सिरिजः भारतले टस जित्यो, हेर्नुस् तेस्रो खेलमा को–कोले पाए मौका?
पाँच खेलको सिरिजमा दुवै टिमले दुई—दुई खेलमा जित निकालेको छ । निर्णायक खेलमा भारतले एक र अष्ट्रेलियाले दुई खेलाडी परिर्वतन गरेको छ । अष्ट्रेलियाले मार्कस स्टोनिस र नाथन लायनले आज टिममा समावेश गरेको छ । उसले शन मार्स र जोसन बेहनड्रफलाई आराम दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतलाई अर्को झड्का, धोनी पनि सस्तैमा आउट
यस्तै, भारतले पनि आजको खेलमा २ खेलाडी परिर्वतन गरेको छ । उसले केएल राहुलको स्थानमा रविन्द्र जडेजा र युजवेन्द्र चहलको ठाउँमा मोहम्मद सामीलाई मौका दिइएको हो । को—कोले पाए आज मौका? हेर्नुस्—
ट्याग्स: Australia Vs. India, Usman Khawaja